यो निद्रा गोली र रक्सी मिक्स गर्न सुरक्षित छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
प्रेस कम्पनी, औषधि जानकारी खेलहरु स्वास्थ्य औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट कम्पनी, चेकआउट औषधि बनाम मित्र कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> प्रिस्क्रिप्शन स्लीप एड्स लिँदा यो रक्सी पिउन सुरक्षित छ?
प्रिस्क्रिप्शन स्लीप एड्स लिँदा यो रक्सी पिउन सुरक्षित छ?
उच्च तनावको स्तर भएका वयस्कहरूमा Fort percent प्रतिशतले समस्या निद्रामा रिपोर्ट गर्छन् अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ । के तपाइँ निदाउन मद्दत गर्न एक निद्रा सहायता विचार गर्दै हुनुहुन्छ? यो ठीक छ यदि तपाइँको डाक्टरले सिफारिस गर्दछ। तर, यदि तपाइँ मद्दत गर्न वा मद्दतको लागि मदिरा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं आगोसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। ओरागोनको वन ग्रोभ स्थित प्यासिफिक विश्वविद्यालयका सहयोगी प्राध्यापक, र सिंगलकेयरको मेडिकल समीक्षा बोर्डका सदस्य, जेफ फोर्टनर, फार्म डीडी भन्छन्, निद्रा गोली र मदिराको संयोजन गर्नु एकदम खतरनाक छ। तपाईंले बिल्कुल यो गर्नु हुँदैन।
र जब केही निद्रा सहयोगहरूले उच्च स्तरको जोखिम लिन्छ, चेतावनी सबै प्रकारहरूमा लागू हुन्छ सहित, अम्बियन (सबै भन्दा सामान्य रूपमा निर्धारित निद्रा सहायता), Lunesta , र सोनाटा, साथै ओरेक्सिन रिसेप्टर एन्टिगोनिस्टहरू भनिने प्रिस्क्रिप्शन स्लीप एड्सको नयाँ कक्षामा (हालसालै एफडीए स्वीकृति प्राप्त भएको यस वर्गमा लाग्ने ड्रग्स) बेलसम्रा )।
निद्रा गोली र रक्सीको संयोजनको जोखिम
मदिरा र निद्रा एड्स दुबै केन्द्रीय स्नायु प्रणाली डिप्रेसनरहरू हुन्, डा। फोर्टनर भन्छन्। तिनीहरूको आफ्नैमा, औषधिहरूले तपाईंको श्वसन दर सुस्त पार्दछ। यो औषधिले तपाईलाई आराम र निद्रामा मद्दत गर्दछ। रक्सीको साथ निद्रा गोलीलाई मिश्रण गर्नाले तपाईंको सास कम्तीमा खतरनाक रूपमा कम गर्न सकिन्छ - सम्भावित जीवनलाई जोखिममा पार्ने दृश्य।
सीएनएस दमनले [कसैलाई] सास फेर्न रोक्न सक्छ र मर्नु पर्छ, त्यसैले स्पष्टतः सबैभन्दा नराम्रो नतिजा हुनेछ, उनी भन्छन्।
माइकल ब्रूस, पीएचडी। ।, लस एन्जलस मा एक निद्रा चिकित्सा विशेषज्ञ, यसलाई एक गुणात्मक प्रभाव भन्छ। यदि तपाईं एक निद्रा सहायता लिदै हुनुहुन्छ र तपाईं बोर्ड मा रक्सी छ, यो तपाईं को रूपमा तीन पल्ट छ [निद्रा सहायता को], उनी भन्छन्।
त्यो मात्र होईन, संयोजनले कुनै निद्रा बनाउँदछ जुन तपाईं अपेक्षाकृत बेकार हुनुहुनेछ। किनभने निद्रा सहयोगले मानिसहरूलाई निद्रामा पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउँछ, उनीहरूले शरीरलाई चाहिने गहिरो र स्फूर्तिदायी निद्रा प्राप्त गर्न सहयोग गर्दैनन्। रक्सीको थप समावेश गर्दा निद्राको गुणस्तर अझ खराब हुन्छ।
यदि तपाईं [एक निद्रा सहायता] माथिको रक्सी थप्नुभयो भने, यसले तपाईंलाई हल्का निद्रामा पार्छ, ब्रेस बताउँदछन्।
एक Ambien र रक्सीको बीच छनौट
निद्रा सहायताको सहायता बिना तपाईं सुत्न सक्नुहुन्न भने नि? दुर्भाग्यवस, एक मात्र सुरक्षित समाधान भनेको त्यो गिलास वाइन त्याग्नु हो।
सुक्खा खोकी को लागी काउन्टर औषधि भन्दा राम्रो
तपाईसंग एक गिलास वाइन वा निद्राको गोली हुन्छ, तर दुबै होइन, ब्रेस भन्छन्। ऊ अग्रिम निर्णय लिने र यसलाई टाँस्ने सल्लाह दिन्छ।
महत्त्वपूर्ण रिमाइन्डर — जस्तो कि तपाईले रक्सी पिउनु हुँदैन र ड्राइभ गर्नु हुँदैन तपाईले निदाउने गोली पनी पछाडि ड्राइभ गर्नु हुँदैन। उदाहरण को लागी, घर चलाउन अघि एक निद्रा गोली नलगाउनुहोस्, यो लाग्न केही समय लाग्नेछ सोच्नुहोस्। निद्राको गोली लिनुहोस् बिस्तरको अलि अगाडि, जब तपाईंसँग कम्तिमा आठ घण्टा सुत्नुपर्दछ।
रक्सी पिए पछि तपाइँ निदाउने गोली लिन कहिले पर्खनु पर्छ?
र डा। फोर्टनर चेतावनी दिन्छन् कि जब सबैको मेटाबोलिज्म फरक हुन्छ, र पेय र निद्रा सहायता बीचको निरपेक्ष न्यूनतम अवधि छ घण्टा हुन्छ। अझै पनि, उसले मानिसहरूलाई दुईलाई पूर्ण रूपमा मिलाउनबाट जोगिन आग्रह गर्दछ - यो जोखिमको लागि लायक छैन।
यदि तपाइँसँग एक गिलास वाइन छ, र अनजानमै पछि निद्रा सहायता लिनुभयो भने के हुन्छ? के तपाईं जीवन-खतरनाक लागूऔषध लागुपदार्थ अन्तर्क्रियाको तत्काल जोखिममा हुनुहुन्छ? तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्न, उत्तम तरिका भनेको) क) तुरुन्त रक्सी पिउनु र ब) साथी वा परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि लक्षणहरू अनुगमन गर्न मद्दत गर्न भन्नुहोस्। सम्भावित समस्याको लक्षणहरूमा अत्यधिक चक्कर र सुन्द्री, बेहोश हुनु, सास फेर्न कठिनाई, र ढिलो मुटुको दर समावेश छ।
र यदि केहि बन्द जस्तो देखिन्छ भने, तर तपाइँ जान्नुहुन्न कि यो गम्भीर मुद्दा हो कि होइन?माफ गर्नु भन्दा सुरक्षित हुनु राम्रो हो। यदि तपाइँ के गर्न अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, तपाइँको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई मद्दतको लागि कल गर्नुहोस्, डा। फोर्टनरले भने। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईले जीवनलाई जोखिममा पार्ने आपतकालिन अनुभव गरिरहनु भएको छ भने, 911 मा कल गर्नुहोस्।
जब तपाइँ मेलाटोनिन र रक्सी मिक्स गर्नुहुन्छ के हुन्छ?
मेलाटोनिन एक पूरक आहार हो जुन धेरै व्यक्तिले नुस्खेको गोली भन्दा सुरक्षित निद्रा सहायताको रूपमा हेर्छन्। यो एक हर्मोन हो जुन तपाईंको शरीरले स्वाभाविक रूपमा तपाईंको निद्रा चक्र, वा सर्कडियन ताल तालिका राख्नको लागि उत्पादन गर्दछ। यद्यपि यो काउन्टर भन्दा बढी उपलब्ध छ, यो रक्सीको साथ मिसिनु हुँदैन। संयोजनले तन्द्रा, चक्कर आउने, चिन्ता, वा बढी रक्तचाप जस्तै साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। निद्रा गोली जस्तै, तपाईं रक्सी वा melatonin छान्नु पर्छ - दुबै होईन।
सम्बन्धित: सहि melatonin खुराक खोज्दै
तपाइँको निद्रा बानीमा काम गर्नुहोस्
यी सबैको साथ, ब्रेस भन्छन कि उनी मानिसहरूलाई निन्द्रा सहयोगको प्रयोग बिना नै राम्रो निद्रा प्राप्त गर्ने दिशामा काम गर्न प्रोत्साहित गर्छन्। यो तपाईंको स्वास्थ्यको लागि उत्तम समग्र हो means र यसको मतलब यो पनि तपाईं चिन्ताविना त्यो गिलास वाइन पाउन सक्नुहुन्छ। उनी भन्छन, 'निद्रा एड्सको आफ्नो ठाउँ छ, र एक सामान्य नियमको रूपमा, एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको रेखदेखमा तीन महिनाको उपचार कोर्सले तपाईंलाई सही ट्र्याकमा लान सक्छ। यद्यपि उनी बिरामीहरू भएको हेर्न चाहँदैनन् निद्रा एड्स मा निर्भर भागमा किनकि तिनीहरू प्रचार गर्दैनन् कि गहिरो निद्रा सबैलाई चाहिन्छ। यसको सट्टा, उसले मानिसहरूलाई संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापीको माध्यमबाट उनीहरूको निद्रा बानी सुधार गर्न प्रोत्साहन गर्दछ।
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी निद्राको गोली भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, यो लामो समयसम्म रहन्छ र रक्सीमा मिसाउँदा कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, उनी भन्छन्।
अर्को पढ्नुहोस्: आज राती राम्रो निद्राका लागि २ ways तरिकाहरू
इन्सुलिनको मूल्यहरू: इन्सुलिनको मूल्य कति छ?
१० औषधि तपाईले रक्सीको साथ मिसिन हुनुहुन्न
meloxicam कति समय लाग्छ यो काम गर्न को लागी
तपाइँ कसरी बताउनुहुन्छ कि तपाइँ कुन प्रकारको रगत हुनुहुन्छ?
कती ibuprofen तपाइँ २४ घण्टा मा लिन सक्नुहुन्छ
डिपो शट प्रभावकारी छ
कसरी औषधि बिना छिटो घाँटी दुख्ने उपचार गर्न
एक दिन मा खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउनुहोस्